အဖြူ အတို ခါဝန် တိုတိုလုံကြီး ပေါက်လှရဲ့ အလှ မလုံတလုံ ကမ်းခြေမှ ဝတ်စုံလေး နဲ့ ရင်ဖိုစရာ ကောင်းလွန်း နေတဲ့ နန်းမွေစံ ရဲ့ ဗီဒီယို…. – Shwe Naung
အဖြူ အတို ခါဝန် တိုတိုလုံကြီး ပေါက်လှရဲ့ အလှ မလုံတလုံ ကမ်းခြေမှ ဝတ်စုံလေး နဲ့ ရင်ဖိုစရာ ကောင်းလွန်း နေတဲ့ နန်းမွေစံ ရဲ့ ဗီဒီယို….
ချစ်ပရိသတ်ကြီးရေ မော်ဒယ်နန်းမွေစံ ကတော့ ပရိသတ် တွေရဲ့ ချစ်ခင် အားပေးမှုကို အခိုင်အမာ ရယူထားနိုင်ခဲ့တဲ့ မော်ဒယ် တစ်ယောက် ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အမိုက်စားဖက်ရှင် လေးတွေကို အများဆုံး ဝတ်ဆင် လေ့ရှိတဲ့ သူမကတော့ အလန်းစား
ခန္ဓာကိုယ် ကောက်ကြောင်း အလှကို ပိုင်ဆိုင် ထားတဲ့ အနုပညာရှင် တစ်ယောက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ စူးရှတဲ့ အကြည့် လေးတွေ နဲ့ ပရိသတ်တွေ ရဲ့ အချစ်ကို ရယူ ထားနိုင်ခဲ့တဲ့ သူမကတော့ အမိုက်စား ပုံရိပ် လေးတွေကို လူမှုကွန်ယက် ထက်တင် ပေးလေ့ရှိပါတယ်။
မြန်မာဆန်ဆန် ဖက်ရှင်လေးတွေ ကိုလည်း ဝတ်ဆင်လေ့ ရှိတဲ့ သူမကတော့ အနုပညာ အလုပ်တွေ အနေနဲ့ ကြော်ငြာ တွေကို ရိုက်ကူးနေတဲ့အပြင် ဖိတ်ကြား ထားတဲ့ ပွဲတွေ ကိုလည်း တတ်ရောက် လျက်ရှိနေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
အမိုက်စားTIKTOK လေးတွေကို ဆော့က စားလေ့ရှိတဲ့ သူမကတော့ ပရိသတ် တွေရဲ့ စိတ်ဝင်စား အာရုံစိုက် ခြင်းကိုခံနေတဲ့ မော်ဒယ် တစ်ယောက် ဖြစ်ပြီး ဝေဖန်မှု တွေရှိနေ ပေမယ့်လည်း အပြုံးမပျက် ဘဲ အနုပညာ အလုပ်တွေ ကိုဆက်လက် လုပ်ကိုင်လျက် ရှိနေပါတယ်။
သူမ ကတော့ ယခုမှာ အမိုက်စား ပုံစံလေးနဲ့ ခန္ဓာ ကိုယ်လေးကို လှုပ်ခါပြီး ကပြ ထားတဲ့ Tiktokဗီဒီယို ဖိုင်လေးကို ပရိသတ် တွေရဲ့ ရှေ့ကို ချပြလာခဲ့ တာပဲ ဖြစ်ပြီး သူမရဲ့ အမိုက်စားTIKTOK ဗီဒီယိုလေးဟာ ပရိသတ် တွေကြားမှာ ကြည့်ရူ သူတွေ များပြားလျက် ရှိနေပါတယ်။
ချစ်ပရိသတ် တွေအတွက် မော်ဒယ် နန်းမွေစံရဲ့ အဆိုပါTIKTOKဗီဒီ ယိုဖိုင်လေးကို ပြန်လည် ဖော်ပြပေးလိုက် ပြီး အဆို ပါဗီဒီယို ဖိုင်လေးကို ပြန်လည် ဖော်ပြ ပေးလိုက်ရပါတယ်။
နန်းမွေစံရဲ့ ဆက်ဆီကျကျ ကပြထားတဲ့ အမိုက်စား ဗီဒီယိုလေး…